Aad su’aalo ka qabtid cuntooyinka ama lacagaha WIC.
Waxaad wayday cuntooyin aad istidhaahdo waxaa ansixiyay WIC.
Kaarkaaga ayaa lumay, la xaday, ama waxyeelo soo gaadhay.
Waxaad baddalaysaa marka hore PIN-ka, kadibna waxaad isla markaaba wacaysaa barnaamijka WIC ee deegaanka! Kadibna waxaanu joojin doonaa cid kasta oo isku dayda inay isticmaasho gunnada raashinka waxaananu kaa caawin doonaa sidii aad u heli lahayd kaadh cusub.
Gunnooyinka cuntooyinka ee wakhtigan ay rarayaan xafiiska WIC isla markaaba waa la heli doonaa. Gunnooyinka raashinka ee bilaha soo socda waxaa lagu shubi doonaa kaardhkaaga eWIC saqbadhka taariikhda uu bilaabmayo waxaanu dhici doonaa saqbadhka taariikhda dhammaadka.
KAYDSO KAADHKAAGA eWIC! Xataa marka aad wada iibsatay dhammaan cuntooyinkii WIC, kaadhkaaga dib ayaa loo isticmaali karaa. Gunnada xigta ee lagu siiyaa waxaad ku iibsan kartaa isla kaadhka eWIC.
Siday wax noqonayaan haddii aanan iibsan karin waxba anigu oo aan u baahdo in qof kale wax ii soo iibiyo?
Siday wax noqonayaan haddii aanan iibsan dhammaan cuntooyinka WIC? Gunnooyinkani ma waxa ay u wareegayaan bisha xigta?
Maya, wixii gunno ah ee aanad isticmaalin waxa ay
Ku iibso waxa aad doonto. Khasab maaha inaad dhammaan cuntada mar kaliya wada iibsato!
Mari kaadhkaaga eWIC marka aad bilawdo iibka.
Mari kaadhkaaga eWIC kahor inta aanad waxba iibsan.
Baaqiga kugu hadhsan waxaad ku bixin kartaa lacag caddaan ah, EBT, SNAP ama nooc kale oo lacag bixin ah oo tukaanku qaato.
Waa maxay PIN (Personal Identification Number (Lambarka Aqoonsiga Shakhsi Ahaaneed))?
PIN-ku waa afar lambar oo sir ah, oo kaadhka la socda, kaas oo kuu sahlaya inaad ku gasho gunnada WIC. Marka aad dooranayso PIN, waxaad doorataa afar lambar oo fudud oo aad xasuusan karto, laakiin ay ku adag tahay in qof kale garto (tusaale ahaan, taariikhda dhalashada waalidkaa ama taariikhda dhalashada ilmahaaga).
Siday wax noqonayaan haddii aan illoobo PIN-kayga ama aan doonayo inaan baddalo?
Siday wax noqonayaan haddii aan PIN khaldan geliyo?
HA isku dayin inaad ku nasiibiso PIN-kaaga. Haddii PIN-ka aad gelisay aanu sax ahayn oo aad afar jeer isku daydo, PIN-kaaga waa la xidhi doonaa. Tani waxaa loo sameeyaa si looga hortago in qof ku nasiibiyo PIN-kaaga oo uu qaato gunnada cuntadaada. Si aad u furto kaadhkaaga waa inaad sugtaa ilaa saqbadhka markaa ayay xisaabtaadu si otomaatig ah u furmi doontaa.
Warbixinta Takoor La’aanta
SNAP iyo FDPIR ama wakaaladaha degmadda, iyo dadka hela, waa inay muujiyaan Warbixinta Takoor la’aan ee soo socota:
Si waafaqsan sharciga xuquuqda madaniga ah ee federaalka iyo Maraykanka. Waaxda Beeraha (USDA) shuruucda xuquuqda madaniga ah iyo xeerarka, USDA, Wakaaladaheeda, xafiisyada, iyo shaqaalaha, iyo hay’adaha ka qayb galaya ama maamulaya barnaamijyada USDA waxaa laga mamnuucay ku takoorida ku salaysan isirka. midabka, asalka wadaka, galmada, caqiidada diinta, naafanimada, da’da, rumaynta siyaasadeed, ka aarsiga ama aargoosiga hawl xuquuq madani oo hore barnaamij kasta ama hawl ay qabatay ama maalgelisay USDA.
Dadka naafada ah ee u baahan qaab kale oo wada xidhiidh oo macluumaadka barnaamijka ah (tusaale, Farta qoraalka indhoolaha, daabacaad wayn, cajal maqal ah, Luqadda Dhegoolaha ee Maraykanka, iwm), waa inuu la soo xidhaadhaa Wakaalada ( Gobol ama degmo) halka ay ka soo codsadeen dheefaha. Dadka dhegoolaha ah, maqalku ku adagyahay ama leh naafo hadalka ah waxay kala soo xidhiidhi karaan USDA Is gaadhsiinta Federaalka ee Dadka Nafada ah lambarkan (800) 877-8339. Intaa waxa dheer, macluumaadka barnaamijka waxaa lagu heli karaa luqaddo kale.
Si loo gubiyo cabashada takoor la’aanta, buuxi foomka Cabashada Takoorka ee Barnaamijka UDSA, (AD-3027) oo onlayn lagaga helo:
How to File a Complaint, iyo xafiis kasta oo USDA ah, ama qor warqad ku socotaUSDA oo warqadda ku bixi dhammaan macluumaadka lagu codsaday foomka. si aad u codsato nuqul foomka cabashada ah, soo wac (866) 632-9992. U soo gudbi foomkaaga la buuxiyay ama warqadda USDA addoo adeegsanaya:
(1) boosta: Maraykanka. Waaxda beeraha Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410;
(3) iimaylka: [email protected]
Hay’dani waa adeeg bixiyaha fursadda loo simanyahay